Lima 4.4 (`break and continue statements´) and 4.5(`pass statements´)´ — TIIDE
Lima 4.4 (`break and continue statements´) and 4.5(`pass statements´)´
4.4 ' break and continue ' Statement
'break' statement က loopingတွေကို ကိုယ်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာရပ်ဖို့ commmand ပေးတဲ့အနေနဲ့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ loopingတွေရဲ့ inner အကျဆုံးအပိုင်းထဲမှာ break out လုပ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ for loop, while loop တွေထဲမှာ loopingမရပ်တော့မယ့်အခြေအနေမျိုးတွေ terminateလုပ်ချင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာ 'break' statement ကိုသုံးလို့ရပါတယ်။
အပေါ်ကဥပမာမှာဆိုရင် if conditionနဲ့ကိုက်ညီသွားတဲ့အခါမှာ loopingကိုရပ်စေချင်တဲ့အတွက် 'break' statementကိုသုံးထားပါတယ်။
print( n, ' equals ' ,x, ' * ', n//x)
Egကဒီပုံစံအတိုင်းအလုပ်လုပ်တာပါ။ ပထမ for loopingက2လို့သတ်မှတ်လိုက်တာနဲ့ ဒုတိယ for loopingက ပထမ loopingရောက်တဲ့အရေအတွက်ထိပဲအလုပ်လုပ်ပေးမှာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ prime numberရှာတာက ဂဏန်းတစ်လုံးကိုသူကိုယ်တိုင်စားလို့ပြတ်ပြီးကျန်တဲ့ကိန်းတွေနဲ့စားရင် မပြတ်တာကိုခေါ်တာပါ။ ပထမကိန်းရဲ့အရေအတွက်ထက်ကြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ စားလို့မပြတ်နိုင်တော့ပါဘူး။အဲ့အတွက် ပထမကိန်းနဲ့ တူညီတဲ့ range ထိပဲ ဒုတိယ for loopingကို သတ်မှတ်ထားတာပါ။ if statement ထဲဝင်တဲ့အချိန်ကျရင် if condition မှန်ခဲ့လှျင် ဆက်အလုပ်မလုပ်တော့ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် break statement နဲ့သုံးထားတာကြောင့် ဒုတိယ for looping ထဲကအပြီးထွက်သွားပြီး ပထမ for looping ကိုပြန်ပတ်ပါတယ်။အကယ်၍ ဒီနေရာမှာ break statement မသုံးထားဘူးဆိုပါက ဒုတိယ for looping ကမရပ်ဘဲ if condition ဆက်စစ်နေပြီဆိုရင် program မှားသွားနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာဆို break statement ကိုမသုံးမဖြစ်သုံးရပါမယ်။break က သူအလုပ်လုပ်နေတဲ့ looping ကနေ လုံးဝထွက်သွားတာမျိုးပါ။
4 equals 2*2
6 equals 2*3
8 equals 2*4
9 equals 3*3
4 isaprime nuber
' continue 'ကတော့ 'break 'နဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်။'continue 'က condition ကို မရပ်ပစ်ဘဲ ဆက်စစ်ချင်တဲ့အခါမျိုးမှာ သုံးပါတယ်။'break' တုန်းကတော့ ကိုယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ target ရောက်ရင်' break ' statement တွေ့တာနဲ့ ချက်ချင်းကိုယ်ရောက်နေတဲ့ looping နေရာကို လုံးဝ break outလုပ်ပစ်ပါတယ်။ပြီးမှနောက်ထပ် looping ထပ်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပါ။(တစ်နည်းအားဖြင့် looping ကနေလုံးဝထွက်သွားတာပါ။
) 'continue' ကျတော့ ကိုယ်ပေးထားတဲ့ target point ရောက်လို့ condition မှန်တာနဲ့မရပ်ပစ်ဘဲ looping ကိုဆက်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။'break 'လိုမျိုး looping ရပ်ပစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ဆက်ပြီး condition စစ်ပေးတဲ့သဘောပါ။ 'continue' ကိုတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ looping ကိုချက်ချင်းပြန်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
ဒီeg. မှာဆိုရင် 'banana 'ကိုတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ print အလုပ်ကိုမလုပ်တော့ဘဲချက်ချင်း looping ပြန်ပတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့် 'banana'ကိုကျော်သွားပြီး 'cherry' ဆိုပြီးထွက်လာပါတယ်။
'continue' က else statement အစားလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။'break' လိုပဲ looping တွေရဲ့ innermost မှာပဲအလုပ်လုပ်ပေးပါတယ်။(eg. for/while)
'break' တို့ continue တို့ကိုလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာခေါ်သုံးခွင့်ရှိပါတယ်။
x=int(input("Enter an integer:"))
Enter an integer:-2
ဒီeg မှာဆိုရင် 'continue' ရော 'break' ရောတွဲသုံးပေးထားတယ်။user ထည့်လိုက်တဲ့ input ကို looping ပတ်တဲ့အခါမှာ positive
ဖြစ်တဲ့အထိ 'continue' နဲ့အလုပ်လုပ်နေမှာပါ။positive ဖြစ်သွားမှ break out ဖြစ်ပြီး looping ရပ်သွားတာကိုတွေ့ရပါမယ်။
4.5 'Pass' statement
Loop တစ်ခု(သို့မဟုတ်)function တစ်ခုကို အလုပ်မလုပ်စေဘဲ လိုအပ်သည့်အခါမှယူသုံးနိုင်အောင် empty body လေးတစ်ခုကြိုတည်ဆောက်ထားချင်ရင် body ထဲမှာ 'Pass' statement လေးကိုခေါ်သုံးနိုင်ပါတယ်။
>>>for val in sequence:
ဒီဥပမာပုစ္ဆာ မှာဆိုရင် for loop အတွက် ဘာအလုပ်မှမလုပ်သေးစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်looping ထဲမှာ 'Pass' statement ကို ထည့်သုံးထားပါတယ်။
Function နဲ့ class တွေကိုလည်း empty body တွေအဖြစ်တည်ဆောက်ထားလို့ရပါတယ်။
eg. def function(args):
eg. class example: